Iska Baro Drone-ta Akinci Ee Turkiga Dhawaan Sameeyey | Xaqiiqonews
Iska Baro Drone-ta Akinci Ee Turkiga Dhawaan Sameeyey
Turkiga ayaa maalinkii Axadda shaaca ka qaaday, nooc cusub oo ah diyaarad drone ah.
Diyaaradaha Turkiga Sameeyo ee drones-ka ah ayaa la sheegaa in ay wacdaro ka dhigeen Suuriya iyo Liibiya, Warbaahinta ayaana diyaaradahani ku tilmaamtay “kuwo badalaya isla-egta Dagaalka”.
Warbaahinta Turkiga ayaa horumarinta barnaamijydan noocani ah ku sheegtay mid Turkiga siineysa Faan iyo horumar uu ka gudbi karo waxa ay ugu yeereen “Xilligii adkaa ee laga soo maray sameynta difaacyada”.
Maamulaha shirkadda Baykar Technologies, ninka lagu magacaabo Seljuk Bayrakdar (xididna la ah Recep Tayyip Erdogan) ayaa dhawaan ka soo muuqday Filim Dikumentari ah oo laga sameeyey drone-ta cusub ee ” Akinci”.
Drone-ta Cusub oo ka mid “nooc yada waaweyn ” ee Turkiga sameeyo ayaa leh awood ay kor ugu kici karto joog dhan 12, 000 oo mitir, waxa ayna hawada ku jiri kartaa 24 saac oo xiriir ah.